Ch 10 मत्ती – 2माछा
घर / बाइबल / मत्ती को सुसमाचार / Ch 10 मत्ती
10:1 र सँगै आफ्नो बाह्र चेलाहरूलाई बोलाएर भएको, उहाँले अशुद्ध आत्माहरू उनलाई अख्तियार दिनुभयो, तिनीहरूलाई फ्याँकिएको गर्न र हरेक रोग र हरेक अशक्तताले निको पार्ने.
10:2 अब बाह्र प्रेरितहरूको नाम यी हुन्: पहिलो, सिमोन, जो पत्रुस भनिन्छ, र एन्ड्रयू आफ्नो भाइ,
10:3 Zebedee को याकूब, र यूहन्ना आफ्नो भाइ, फिलिप र Bartholomew, थमस र मत्ती कर कलेक्टर, र अल्फयसको जेम्स, र थेदियस,
10:4 सिमोन कनानी, र यहूदा इस्करियोत, जो पनि उहाँलाई धोका.
10:5 येशूले यी बाह्र पठाए, तिनीहरूलाई instructing, यसो: "अन्यजातिहरूको को खैर यात्रा नगर्नुहोस्, र सामरीहरूलाई शहर पस्न छैन,
10:6 तर सट्टा इस्राएलका घर देखि दूर खसेको छ जसले भेडा जानुहोस्.
10:7 र निस्कने, प्रचार, यसो: 'स्वर्गको राज्य लागि नजिकै आएको छ।'
10:8 यो infirm उपचार, मरेका हुर्काउन, कुष्ठरोगियहरुको सफा, दुष्ट फ्याँकिएको. तपाईं खुलेर प्राप्त गरेका छन्, त्यसैले खुलेर दिन.
10:9 सुन अधिकार गर्न छनौट छैन, न त चाँदीका, न त आफ्नो बेल्ट पैसा,
10:10 न त यात्रा को लागि प्रावधान, न त दुई tunics, न त जूता, न त एक कर्मचारी. को laborer लागि आफ्नो भाग योग्य.
10:11 अब, जो शहर वा शहर मा तपाईं प्रविष्ट हुनेछ, यो भित्र योग्य छ जो रूपमा सोध्नु. तपाईं प्रस्थान सम्म र त्यहाँ रहन.
10:12 त्यसपछि, जब तपाईं घर प्रवेश, यो अभिवादन, यसो, 'यो घर शान्ति।'
10:13 र यदि, साँच्चै, कि घर योग्य छ, आफ्नो शान्ति यसलाई मा आराम हुनेछ. तर यो योग्य छैन भने, आफ्नो शान्ति तपाईं फर्केर.
10:14 र तपाईं जसले प्राप्त गरेको छ न त, न त आफ्नो शब्दहरू सुने, कि घर वा शहर देखि प्रस्थान, आफ्नो खुट्टा देखि धूलो बन्द मिलाउ.
10:15 Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो न्यायको दिनमा सदोम र गमोराका देशमा लागि थप सहन सकिने हुनेछ, सहर लागि भन्दा.
10:16 हेर, म ब्वाँसा बीचमा भेडा जस्तै तपाईं पठाउने छु. त्यसैले, रूपमा serpents रूपमा चतुर र रूपमा कबूतर रूपमा सरल हुन.
10:17 तर मानिसहरूको सावधान रहन. तिनीहरूले councils तपाईं हात गर्नेछ, र तिनीहरूले सभाघरहरूमा तपाईं महामारी हुनेछ.
10:18 र तपाईं मेरो निम्ति दुवै शासक र राजा अघि नेतृत्व गरिनेछ, तिनीहरूलाई एक गवाही र अन्यजातिहरूको गर्न.
10:19 तर तिनीहरूले तपाईंलाई हात गर्दा, बोल्न कसरी वा कुन सोच्न चयन छैन. बोल्न के को लागि भनेर घण्टामा तपाईं दिइएको गरिनेछ.
10:20 यो तपाईं छैन कसले बोल्ने हुनेछ, तर आफ्नो पिताको आत्मा, तपाईंलाई जसले बोल्न हुनेछ.
10:21 र भाइ मृत्यु भन्दा भाइ सुम्पनुहुनेछ, र बुबा भन्दा छोरा सुम्पनुहुनेछ. र छोराछोरीलाई आमाबाबु विरुद्ध खडा हुनेछ र मृत्यु ल्याउन.
10:22 र तपाईं सबै मेरो नाम खातिर घृणा गरिनेछ. तर जसले persevered हुनेछ, पनि अन्त गर्न, एउटै सुरक्षित गरिनेछ.
10:23 तिनीहरूले एक शहर मा तपाईं खेदो गर्दा अब, अर्को मा भाग्न. Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, तपाईं इस्राएलका सबै शहर छैन निकास हुनेछ, मानिस लाभ पुत्र अघि.
10:24 चेला शिक्षक माथि छैन, न त आफ्नो मास्टर माथिको सेवक छ.
10:25 उहाँले आफ्नो शिक्षक जस्तै कि चेला लागि पर्याप्त छ, र दास, आफ्नो मास्टर जस्तै. तिनीहरूले परिवारको पिता भनिन्छ भने, 'Beelzebub,'कसरी धेरै आफ्नो घर को ती?
10:26 त्यसैले, तिनीहरूलाई डर छैन. केही ढाकिएको छ लागि भनेर छैन प्रकट गरिनेछ, न त ज्ञात छैन गरिनेछ भनेर लुकेको.
10:27 के म अन्धकारमा भन्दछु, ज्योति बोल्न. र तपाईं कान मा whispered सुन्न के, को छत माथि प्रचार.
10:28 र शरीर मार्न गर्नेहरूको नडराऊ, तर प्राण मार्न सक्षम छैनन्. तर यसको सट्टा नरक मा प्राण र शरीर दुवै नष्ट गर्न सक्षम छ जो उसलाई डर.
10:29 दुई sparrows एक सानो सिक्का लागि बेचिएको छैन? र अझै उनलाई एक आफ्नो पिता बिना भुइँमा गिर छैन.
10:30 लागि आफ्नो टाउको को पनि hairs सबै संख्यात्मक गरिएको छ.
10:31 त्यसैले, नडराऊ. तपाईं धेरै sparrows भन्दा लायक अधिक हो.
10:32 त्यसैले, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father, जो स्वर्गमा छ.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, जो स्वर्गमा छ.
10:34 म पृथ्वीमा शान्ति पठाउन आएको विचार छैन. म आए, शान्ति पठाउन छैन, तर तरवार.
10:35 म उसको पिता विरुद्ध एक मानिस विभाजन आए लागि, र उनको आमा विरुद्ध छोरी, र एक उनको सासू विरुद्ध बुहारी.
10:36 र उसको आफ्नै घरभित्रका ती मानिस को शत्रुहरू हुनेछ.
10:37 जसले पिता वा मलाई भन्दा बढी आमा प्रेम मलाई योग्य छैन. र जसले छोरा वा छोरी मलाई माथि प्रेम छैन मलाई लायकको छ.
10:38 र आफ्नो क्रस जसले लिन गर्दैन अप, र पालन मलाई मेरो लायकको छैन.
10:39 जसले आफ्नो जीवन पाता, यो गुमाउनु. र जसले किनभने मलाई आफ्नो जीवन गुमाए हुनेछ, यसलाई पाउन पर्छ.
10:40 जसले तपाईं प्राप्त, मलाई प्राप्त. अनि जसले मलाई प्राप्त, मलाई पठाउनुहुने उहाँलाई प्राप्त.
10:41 जसले एक अगमवक्ता प्राप्त, एक अगमवक्ता को नाम मा, एक अगमवक्ताको इनाम हुनेछ. र जसले सिर्फ को नाम मा प्राप्त बस बस को पुरस्कार प्राप्त हुनेछ.
10:42 र जसले दिन हुनेछ, यी को कम से कम पनि एक, पिउन चिसो पानी को एक कप, केवल एक चेला को नाम मा: Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, उहाँले आफ्नो इनाम गुमाउन हुँदैन। "